I-OEM & ODM vispring intengo kamatilasi Uhlu Lwamanani | Rayson
Eqondiswa ukuqanjwa kabusha kwesayensi nobuchwepheshe, uRayson uhlala egxile ekubhekeni ngaphandle futhi unamathela entuthukweni enhle ngesisekelo sokusungula izinto ezintsha zobuchwepheshe. intengo kamatilasi we-vispring Besitshala imali eningi emkhiqizweni we-R&D, okuvele ukuthi uyasebenza ukuthi sithuthukise intengo kamatilasi we-vispring. Ngokuthembela kubasebenzi bethu abasungula izinto ezintsha nabasebenza kanzima, siqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, amanani avumayo kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Siyakwamukela ukuthi usithinte uma unemibuzo.Lo mkhiqizo unokuphefumula okufunayo. Indwangu yayo inesakhiwo esinezimbotshana futhi iphathwa ngokukhethekile ukuze ibe nokungena komoya okuhle nokumuncwa komhwamuko.